Ungayithuthukisa kanjani izinga lami lewebhu lomuntu omdala ngokusemthethweni?
Ezinsukwini zethu i-SEO idlala indima ebalulekile kunoma yikuphi ukuthuthukiswa kwebhizinisi ukuthi unayo ibha yokudla noma indawo yesitolo. Kuzo zombili izimo, inhloso eyinhloko yohwebo lebhizinisi ukuheha izivakashi eziningi nokukhulisa imali yabo. Namuhla ukwenza ibhizinisi lakho liphumelele, udinga ukulibeka ku-intanethi futhi ukwandise ngokuvumelana nazo zonke izindinganiso zenjini yokusesha. Okuphakeme kwakho isikhundla ku-SERP, ukuthengisa okuningi okukhona.
Ukulungiswa kwe-injini yokudala yabantu kufana nokuhlelwa okujwayelekile kanye nomthelela owodwa kunqubo yokwakha isixhumanisi. Inzuzo enkulu enkulu ye-SEO omdala ukuthi ungakwazi ukubeka i-website yakho kulesi sigaba lula ngenxa yokuncintisana okuphansi. Qinisekisa ukuthi unendlela yokwenza imali yethrafikhi yakho, ngoba ayifinyeki eshibhile.
Ake sixoxe ukuthi singayithutha kanjani ithrafikhi yekhwalithi kusayithi lakho lomdala bese siliyisa ku-Google TOP.
Indawo yokudala ye-SEO ngcono
Kunezici ezine eziphawulekayo ze-SEO ezisebenzela kangcono kunoma yimiphi imikhankaso yokuphromotha kanye nokwenza ngcono kwe-website: ukufaneleka kwekhasi, igunya lesizinda, igunya lokuxhumanisa izixhumanisi, ukufaneleka izixhumanisi ezingenayo.
Ukubaluleka kwekhasi lewebhu kusebenza njengesici esibalulekile se-Google. Kubonisa kokubili abasebenzisi kanye nabakwa-web crawlers ukuthi kufanelekile kanjani okuqukethwe kwewebhu kuwe yombuzo womsebenzisi. Ukwenza isayithi lakho lifanele, udinga ukwandisa imethadatha yayo nokuqukethwe. Okokuqala, udinga ukufaka imishwana ebalulekile ekuqukethwe kwakho kuwebhusayithi, izihloko, izincazelo kanye namathegi e-alt ukuze uqinisekise ukuthi amaklayenti akho angase athole isayithi lakho kalula. Ngaphezu kwalokho, udinga ukukhiqiza okuqukethwe okuningi kwekhwalithi ngangokunokwenzeka. Endabeni yamawebhusayithi amadala, ungabhala izindaba ezithandwayo futhi ushicilele masonto onke.
Isiphathimandla se-Domain yisinye isici esibalulekile sokuthi iqiniso litshelwe alinakwenziwa ngobusuku bonke. Kuthatha isikhashana ukuthola i-website igunya. Ukuze uthuthukise igunya lakho lesizinda, udinga ukunaka ngokukhethekile ukusebenza kwakho kwekhasi elikude futhi udale umkhankaso wokwakha umphumela wokuphumela. Ngaphezu kwalokho, igunya lesikhulu lithonywe ububanzi bezinto zomphakathi ezifana nokuchofoza-ngezinga, ukuguqulwa, isikhathi esilinganiselwe umsebenzisi asebenzisa esiteshini kanye nesilinganiso sokunqoba.
Ngaphezu kwalokho, udinga ukukala igunya lezixhumanisi zakho ezifakiwe njengoba kuyisici esiyinhloko esithonya isayithi lakho elidala le-SEO. Udinga ukufaka izixhumanisi zesayithi yakho kuphela ezizindeni ezigunyazayo nezihlala njalo abasebenzisi abathembayo. Kuzokusiza ukuba ususe isayithi lakho labantu abadala ngaphambi kwezigidi ezigqugquzela abasebenzisi. Ngineluleka ukuthi ucabange ngezilinganiso zakho ezihlanganisiwe nezixhumanisi zabo. Ngaphezu kwalokho, udinga ukuqinisekisa ukuthi ubeka ama-backlink akho okufanelekile ezindaweni zakho zemakethe. Ngokwesibonelo, kuzobukeka kungaqondakali uma ufaka isixhumanisi sakho sewebhusayithi endala esizindeni esichaza ukudla komntwana.
Njengoba i-Google ingamukeli izikhangiso ze-PPC kumasayithi omdala, kunendlela kuphela yokutshala ekuthuthukiseni injini yokusesha. Ngithemba ukuthi imikhuba yokusebenza engiyikhulume kulesi sihloko izokusiza ukwakha umkhankaso wokuphromotha owinawo futhi uthuthukise isayithi lakho le-SEO omdala Source .